१५:०७, ३ डिसेम्बर २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन
१७ बाइटहरू हटाइयाे , १० वर्ष अघि
१५:०३, ३ डिसेम्बर २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
(नयाँ पृष्ठ: [[Image:Nagasakibomb.jpg|thumbnail|right|200px| सन् १९४५मा जापानका नागासाकीमा झारिएका बमदे...)
१५:०७, ३ डिसेम्बर २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
[[Image:Nagasakibomb.jpg|thumbnail|right|200px| सन् १९४५मा जापानका नागासाकीमा झारिएका बमदेखि उत्पन्न कुकुरमुताकाभयङकर मेघको सदृश बादल - यी बादल बमका झर्नेका स्थानदेखि लगभग १८ किमी माथिसम्म उठेका थिए।]]
'''नाभिकीय अस्त्र''' वा '''परमाणु बम''' एउटा विस्फोटक युक्ति छहो जसको विध्वंशक शक्तिको आधार [[नाभिकीय प्रतिक्रिया]] हुन्छ। यो [[नाभिकीय संलयन]] (nuclear fusion) वा [[नाभिकीय विखण्डन]] (nuclear fission) वा यी दुइटै प्रकारको नाभिकीय प्रतिक्रियाहरुका सम्मिलनदेखि बनाउन सकिन्छ। दोनोदुइटै नैं प्रकारकोप्रकारका प्रतिक्रियाहरुका परिणामस्वरूप केही नैं सामग्रीदेखि भारी मात्रामा [[उर्जा]] उत्पन्न हुन्छ। आजको एउटा हजार किलोदेखि थोरै ठूलो नाभिकीय हथियार यति उर्जा उत्पन्न गर्न सक्छ जति धेरै अरब किलोका परम्परागत विस्फोटकहरुदेखि नैंविस्फोटकहरुबाट उत्पन्न हुन सक्छ। नाभिकीय हथियार महाविनाशकारी हथियार (weapons of mass destruction) भनिन्छन्।
[[द्वितीयदोस्रो विश्वयुद्ध]]मा सबैभन्दा अधिक शक्तिशाली विस्फोटक, जो प्रयुक्त भएको थियो, त्यसकात्यसको नाम 'ब्लकबस्टर' (blockbuster) थियो। यसकायसको निर्माणमा तबसम्म ज्ञात प्रबलतम विस्फोटक ट्राईनाइट्रीटोलीन (TNT)को 11 टन प्रयुक्त भएको थियो। यस विस्फोटकदेखि 2000 गुना अधिक शक्तिशाली प्रथम परमाणु बम थियो जसको विस्फोट टी. एन. टी.का 22,000 टनका विस्फोटका बराबर थियो। अब त प्रथम परमाणु बमदेखिबम भन्दा अधिक शाक्तिशाली परमाणु बम बनेका छन्।
परमाणु बममा विस्फुटित हुनेवाला पदार्थ [[यूरेनियम]] वा [[प्लुटोनियम]] हुन्छ। यूरेनियम वा प्लुटोनियमका परमाणु विखंडन (Fission) देखि नैं शाक्ति प्राप्त हुन्छ। यसका लागि परमाणुका केन्द्रक (nucleus)मा न्यूट्रॉन (neutron)देखिद्वारा प्रह्योरप्रहार गरिन्छ। यस प्रह्योरदेखि नैं धेरै ठूलो मात्रामा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। यस प्रक्रमलाई भौतिक विज्ञानी नाभिकीय विखंडन (nuclear fission) भन्दछन्। परमाणुका नाभिकका अभ्यंतरमा जो न्यूट्रान हुन्छन् उनैदेखि न्यूट्रान मुक्त हुन्छन्। यी न्यूट्रॉन अन्य परमाणुहरुमा प्रह्योर गर्दछन् र उनीसित फेरि विखंडन हुन्छ। यी फेरि अन्य परमाणुहरुको विखंडन गर्दछन्। यस प्रकार शृंखला क्रियाहरु आरम्भ हुन्छन्। परमाणु बमको अनियन्त्रित शृंखला क्रियाहरुका फलस्वरूप भीषण प्रचंडताका साथ परमाणुको विस्फोट हुन्छ।
यूरेनियमका धेरै [[समस्थानिक]] ज्ञात छन्। सामान्य यूरेनियममा 99.3 प्रतिशत यू-238 (U-238) र 0.7 प्रतिशत यू-235 (U-235) रहन्छन्। यू-238को विखंडन उतनी सरलतादेखि हुँदैन जति सरलतादेखि यू-235को विखंडन हुन्छ। यू-235मा यू-238को अपेक्षा तीन न्यूट्रान कम रहन्छन्। न्यूट्रॉनको यस कमीका कारण नैं यू-235को विखंडन सरलतादेखि हुन्छ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/191799" बाट अनुप्रेषित